Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Afọ mmalite mmalite ụgbọ elu
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • Technology
Site na nlebara anya na -aga n'ihu na ụlọ ọrụ niile iji mee mgbanwe na ihu igwe ma belata nsị ikuku CO2 zuru ụwa ọnụ, ohere maka ndị egwuregwu ọhụrụ na teknụzụ ụgbọ elu akabeghị.
Ebe mgbanwe ihu igwe na -aga n'ihu, usoro nke ụlọ ọrụ ụgbọelu na -eme atụmatụ ugbu a agaghị ezu. Ọmụmụ ihe ọhụrụ na -egosi maapụ iri anọ na -ekwe nkwa na mpaghara ọhụrụ nke ụgbọ elu na -adigide.
Nchịkọta ahụ site na maapụ Aero Lab Sustainable 40 mmalite mmalite na -ekwe nkwa, na -agbakọ ụgbọ elu na -adigide na mpaghara teknụzụ anọ: Sustainable Aviation Fuels (SAF), Propulsion Electric, Hydrogen, na Digital Backbone.
Ọ na-elekwa anya itinye ego isi ego zuru ụwa ọnụ n'ime teknụzụ efu efu, ubi nke nwetarala traction n'ime afọ isii gara aga, mana ka ọ dị ugbu a ihere ijikọ na ngalaba ụgbọ elu, ọkachasị ma a bịa na ngalaba dị mgbagwoju anya dịka hydrogen. .
Ụlọ nyocha Aero na -adigide lekwasịrị anya na ịmalite ngwa ngwa wee bụrụ onye ndụmọdụ na ngalaba nke ọ bụla edepụtara na ọmụmụ a kemgbe mmalite ya na February 2021. Ụfọdụ n'ime ndị ọkachamara ama ama na ngalaba ụgbọ elu niile esonyelarị dị ka ndị ndụmọdụ.
Stephan Uhrenbacher, onye nchoputa na onye isi ụlọ nyocha Sustainable Aero Lab: “Ndị mmalite na -enweta nlebara anya kachasị na mbara ikuku na -eme njem ụgbọ elu na tagzi ikuku obodo. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ndị a na -eme ka ịpụ ihe na -efe efe wee mejuo ọchịchọ mmadụ, ma ọ bụ tagzi ikuku ma ọ bụ itinye ọtụtụ mmadụ na mbara igwe anaghị edozi nsogbu chere ụgbọ elu azụmahịa: Flying kwesịrị ịbụ enweghị carbon. Na nke a kwesịrị ime ngwa ngwa karịa ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ kwenyere. Ọ na -emepe ohere maka mmalite iji nye akụrụngwa maka ụgbọ elu n'ọdịnihu ma ọ bụ ọbụna ụgbọ elu niile, kamakwa ụdị ọrụ ọhụrụ. ”
“Ụgbọ elu na -efeba ozugbo na nsogbu ihu igwe. Ma imirikiti ụlọ ọrụ na -elekwasị anya n'ibelata ma ọ bụ mebie ikuku anwuru ọkụ, kama iwepụ ha kpamkpam. Enweghị oge fọdụụrụ ime usoro mgbatị a; mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na -apụtawanye ìhè ma na -emetụta ndụ anyị kwa ụbọchị. Anyị chọrọ azịza siri ike nke nwere ike ibuga njem ikuku azụmahịa na-enweghị ikuku n'ime afọ iri na-abịanụ ma ọ bụrụ na anyị nwere olile anya iru ebumnuche nke nkwekọrịta Paris. Ozi ọma ahụ bụ na ụdị ngwọta dị adị na -anọchite anya nnukwu ohere ahịa, ” ka Paul Eremenko, onye isi na onye nchoputa Universal Hydrogen, na onye ndụmọdụ na Sustainable Aero Lab kwuru. Site na mmalite nke ya, Universal Hydrogen, onye bụbu CTO nke Airbus na nke United Teknụzụ na -arụ ọrụ na -ebute ụzọ n'ọrụ a n'onwe ya.
Ị nwere ike chọta ọmụmụ ihe niile site na Sustainable Aero Lab, gụnyere maapụ mmalite na nyocha nke itinye ego itinye ego n'ime teknụzụ efu efu, na webụsaịtị Lab www.sustainable.aero.